Finoana silamo - Wikipedia
(tonga teto avy amin'ny Mozilmana)
Ny Finoana silamo (amin' ny teny arabo: الإسلام / Alʾislām) dia finoana abrahamika mifototra amin' ny finoana an' Andriamanitra tokana farany izay tokana ary amin' ny Kor'any izay heverin' ny mpino silamo fa boky nandraiketana ny tenin' Andriamanitra (Allah) ara-bakiteny natao sora-tononina. Ny Kor'any dia nambara tamin' i Mohamady izay fantatry ny silamo ho mpaminanin' Andriamanitra, tany Arabia tamin' ny taonjato fahafito. Ny fampianarana fototry ny finoana silamo dia ny tawhid, izany hoe ny finoana an' Andriamanitra tokana izay tsy ahitana fanompoana hafa afa-tsy ny fanompoana an' Andriamanitra.
1 Ny finoana an' Andriamanitra tokana
2 Ny boky masina Kor'any
3 Ny mpaminany Mohamady
4 Ny tanàna masin’ i Maka
6 Tetiandro miozolmana
7 Ny sampana lehiben' ny fivavahana silamo
7.1 Ny sonisma
7.2 Ny siisma
7.3 Ny karijisma
8 Ny andry dimin' ny finoana silamo
8.1 Ny fiekem-pinoana na Shahâda
8.2 Ny vavaka na Salat
8.3 Ny fiantrana ny tsy manana na Zakat
8.4 Ny fifadian-kanina na Sawm
8.5 Ny fivahiniana masina mankany Maka na Hadj
11.1 Kor'any amin' ny teny farantsay (Wikisource):
11.2 Kor'any amin' ny teny anglisy (Wikisource):
11.3 Kor'any amin' ny teny malagasy
Allah no anaran' Andriamanitra tokana ao amin' ny finoana silamo. Amin'ny Miozolmana dia i Allah no mpahary izao rehetra izao (na ‘âlam), ka maro ny teny amaritan' ny boky Kor'any ny toetrany, toy ny hoe "mahery", "mahay", "be indra fo", sns. Anarana miisa 99 no omen'ny fivavahana silamo an' ity Andriamanitra tokana ity, izay atao hoe "anaran' Andriamanitra tsara indrindra".
Ny Kor'any no ilay boky masin’ ny Silamo. Ho an’ ireo mpino miozolmana dia teny ara-bakitenin’ ilay Andriamanitra tokana (Allah) ny Kor'any. Amin' ny teny arabo dia القُرْآن / al-Qur’ân no anaran' ilay boky. Ho an’ ny Miozolmana dia fanangonana ny tenin’ Andriamanitra izay fanambaràna (āyāt) nomeny ny mpaminany farany sady irak’ Andriamanitra, dia i Mohamady nanomboka tamin’ny taona 610-612 hatramin’ ny fotoana nahafatesany tamin’ ny taona 632 tamin’ ny alalan’ ny anjely Gabriela (جبريل /Jibrîl). Tamin' ny nanambaràna ny Soratra Masina, Andriamanitra dia niteny tamin' ny alalan' ny anjely Jibrily (Gabriela) sy ny mpaminany Mohamady izay nandre ny tenin' Andriamanitra fa tsy ny feony.
I Mohamady (amin'ny teny arabo محمّد / Muḥammad) no mpaminanin' Andriamanitra. Teraka tao Maka izy. Nanomboka ny asa faminaniany i Mohamady tamin’ny faha-40 taoany rehefa niseho taminy ny anjely Gabriela (Jibril amin’ ny teny arabo) nandritra ny fahitana, araka ny lovantsofina. Nambaran’i Mohamady tamin’ ny fianakaviany sy tamin’ ny namany akaiky ny antsipirian’ izany fanambaràna izany. Efapolo taona taorian’izay dia olona efapolo no voataonany hanaraka ny fivavahany. Tamin’ izany no nanombohany nitory teny imasom-bahoaka tao amin’ ny tanànan’ i Maka nahaterahany. Noho ny tsy fankasitrahan’ ny mponin’ i Maka azy dia niala tao izy tamin’ ny taona 622 ka nankany Iatriba (Yathrib), dia ilay tanàna atao hoe Madina ankehitriny. Izay fifindrà-monina izany no atao hoe Hijra, sady fiandohan’ ny ny fanisan-taona miozolmàna. Tao Iatriba (na Madina) i Mohamady dia tonga nanam-pahefana ara-pôlitika sy ara-pivavahana. Resiny ny ny Arabo sy Jiosy mpanohitra azy tao Madina, avy eo dia niady tamin’ ny tanànan’i Maka izy. Nitombo isa ny foko arabo nanaiky hofehezin’ i Mohamady ary nilavo lefona i Maka tamin’ ny taona 630.
Ny tanàna masin’ i MakaHanova
I Maka dia tanàna any amin' ny tapany andrefan'i Arabia Saodita, miorina 80 km miala ny Ranomasina Mena. Amin' ny teny arabo izy dia atao hoe مكة / Makka. Araka ny lovantsofina silamo dia tao no nahaterahan' ny mpaminany Mohamady tamin' ny faramparan'ny taonjato faha-6. Ao no misy ny môskea Masjid al-Haram ("Moskea Masina") izay misy ny Kaaba (arabo: الكعبة / al-Ka'ba).
Ao amin' ny finoana silamo, ny teny hoe salāt (izay midika hoe "vavaka", avy amin' ny teny arabo hoe صلاة‎ / ṣalāh na صلوات / ṣalawāt raha milaza maro) dia fomba fivavahana arahim-pihetsika ara-batana tsy maintsy atao, ka mifanohitra amin' ny atao hoe dua (arabo: دُعَاء / duʿāʾ) izay midika hoe "fitalahoana". Ny maha zava-dehibe azy eo amin'ny Miozolmana dia ambaran' ny maha isan' ireo Andry dimin'ny finoana silamo azy.
Ialohavan'ny fidiovana (arabo: الوضوء / 'al-wuḍū) sady tanterahina indimy isan'andro izany. Averimberina ny andian-teny atao rakʿah (arabo: ركعة) na rakaʿāt (arabo:ركعات, raha milaza maro) raha anaovana asa (fihetsika) sy lahateny tsy maintsy tanterahina. Ny isan' ny rakaʿāt tsy maintsy atao dia mety ho roa hatramin 'ny efatra arakaraka ny fotoana ao amin' ny andro na ny toe-javatra hafa (toy ny fivavahana amin'ny andro Zoma izay anaovana rakaʿāt roa).
Ny sonisma no sampana lehibe indrindra ao amin' ny finoana silamo izay ahitana ny 80%n' ny mpino silamo maneran-tany. Iray amin' ny sampana telo lehiben' ny finoana silamo ny sonisma. Miavaka amin' ireo sampana hafa ireo ny sonisma noho ny fomba fiheverany ny fivavahana. Matetika dia lazaina ho "Miozolmana ôrtôdôksa" ny Sonita.
Ny siisma dia sampan' ny finoana silamo manaiky fa i Ali sy ny taranany no mpandimby an' i Mohamady. Ny Siita dia eo anelanelan'ny 10% sy 15%n' ny vahoaka miozolmana maneran-tany, ka ny ankamaroany dia monina ao Iràna sy Iràka ary Bareina. Siita dia manana mpitondra fivavahana ahitana ambaratongam-pitondrana.
Ny andry voalohan’ny finoana silamo dia ny fiekem-pinoana izay atao hoe Shahâda (teny arabo: ٱلشَّهَادَة / aš-šahāda).
Andry fahatelo ny fiantrana ny tsy manana, izay atao hoe (arabo: زَكَاة / Zakāt, midika hoe “fanadiovana”) izay ahafahana manadio ny harena azon’ ny mpino. Izany fiantrana izany dia azo alaina amin’ ny vokatry ny fambolena na ny fiompiana na ny vato saro-bidy na ny vola, nefa ireo izay manana harena mihoatra ny ampy tokony hahafahany mivelona soa aman-tsara no manatanteraka izany.
Andry fahefatra ao amin’ ny finoana silamo dia ny fifadian-kanina, izay atao amin' ny teny arabo hoe صَوم / ṣawm. Mandritra ny volana Ramadany no tsy maintsy anaovana izany ka ireo Miozolmana olon-dehibe sy salama tsara no didiana hanao azy. Manombola amin’ ny mangiran-dratsy ka hatramin’ ny filentehan’ ny masoandro dia tsy azon’ ny mpifady hanina atao ny manendry zavapisotro sy ny mihinana sakafo ary ny manao firaisana amin' ny vady. Ny marary sy ny vehivavy mampinono dia tsy terena hifady hanina.
Ny tenim-pinoana silamo silamo dia ireo petra-kevitra tsy azo ovana momba ny finoana. Misy enina izy ireo, dia ireto avyː
Mino ny fisian'ny mpaminanyː i Mohamady no farany amin'izy ireo, i Jesoa (عيسى ابن مريم /ʿĪsā ibn Maryam) no alohan'ny farany, i Mosesy (موسى / Mûsâ) sy i Davida (دَاوُوْد‎ / Dāwūd) sy i Solomona (سُليمان‎ / Sulaymân) sy i Abrahama ( إبراهيم / Ibrahim) sy i Noa (نوح / Nûh) ary ny maro hafa dia nirahin' Andriamanitra talohan' izy ireo ho an' ny vahoakany.
Mino ny fisian'ny boky nalefan' Andriamanitra ety an-tany, izay nataon' Andramanitra, ka ny Kor'any no farany (nambara tamin' i Mohamady, ny Evanjely (إنجيل / ʾInjīl) no talohan' ny farany (nambara tamin' i Jesoa), ary ny Torah (توراة‎) / Tawrat) (nambara tamin' i Mosesy).
Jodaisma - Kristianisma - Bahaisma - Monoteisma - Fanekem-pinoana
Mohamady - Kor'any - Tetiandro miozolmana - Hijra - Finoana silamo eto Madagasikara
Sampanan'ny finoana silamo:
Shiisma - Sonisma - Karijisma
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Finoana_silamo&oldid=998103"
Dernière modification le 12 Oktobra 2020, à 19:21
Voaova farany tamin'ny 12 Oktobra 2020 amin'ny 19:21 ity pejy ity.